पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणलाई कसरी हेर्ने ?-Nepali online news portal
नेपालको एकीकरणले नेपालीलाई फाइदा भयो कि विदेशीलाई ?
अर्कोतिर समुद्रपारबाट बाइबल र औद्योगिक वस्तु बोकेर अङ्ग्रेज कलकत्ताबाट सारा भारतीय राज्यहरू निल्दै उत्तरतिर बढ्दै थियो । अङ्ग्रेजहरू ल्हासासम्म पुग्न चाहन्थे । उनीहरूले एकातिर धर्मका नाममा घुसपैठ गर्दै थिए भने आपसमा लडिरहेका एउटा राज्यका विरुद्ध अर्कोलाई सहयोग गर्दै प्रभाव विस्तार गर्दै थियो । भारत जसरी नै सबै नेपाललाई कब्जा गर्नु उसको रणनीति थियो । ऊसँग लड्नका लागि केन्द्रीकृत र बलियो नेपाल अनिवार्य सर्त थियो । त्यो वस्तुगत आवश्यकतालाई पृथ्वीनारायण शाहले पूरा गरे । आन्तरिक द्वन्द्व र बाहिरी दुस्मनका विरुद्ध लड्न वस्तुगत आवश्यकता थियो । यो वस्तुगत आवश्यकतालाई पृथ्वीनारायण शाहले बुझ्नसकेकै कारण उनी सफल भएका हुन् ।
पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्दै मोहन विक्रम सिंह भन्दछन् “उनले नेपालको एकीकरण राज्य विस्तारको सामन्ती उद्देश्यले प्रेरित भएर नै गरेका थिए । तैपनि उनको कामको ऐतिहासिक र सकारात्मक महत्व छ ।” जनतन्त्र विरोधी शासकहरु पनि साम्राज्यवादविरोधी, एकाधिकार पुँजीवादविरोधी हुनसक्छन् । त्यसैगरी पृथ्वीनाराण शाह अंग्रेज साम्राज्यवादका विरोधी थिए ।
पृथ्वीनारायण शाह वंश परम्परामा आधारित सामन्ती शासक थिए । त्यसप्रकारका शासनप्रणालीको विशेषता उनको शासनकालमा पनि निरन्तर हुने नै भए । त्यसो भनेर भौगोलिक एकीकरणकै विरोध गर्नु इतिहासको वस्तुपरक मूल्याङ्कन हुन सक्तैन । काँगडाको किल्लामा मारिएका नरनारी, भक्ति थापा, अमरसिंह थापालगायत सपूतलाई विस्तारवादी देख्ने चस्माले यो देशको समृद्धि गर्न सक्तैन । जसले नेपालको एकीकरणमा रगत बगाए । पृथ्वीनारायण शाहकालीन नेपाली समाजमा कुन हदसम्म प्रगतिशील कदम चाल्न सम्भव थियो त ? यो कोणबाट पनि बहस हुनुपर्दछ । रणबहादुर शाहले बिधुवा विवाहलगायत सामाजिक सुधारका कदम चाल्नासाथ उनलाई भारदारहरूले पागल स्वामी महाराज आदि आरोप लगाएर एक्ल्याएका थिए । वस्तुुको मूल्याङ्कन ‘भौतिक परिस्थिति र काल’ को आधारमा गरिनिुपर्दछ । अन्यथा हरेक पुस्ताले अग्रजलाई धारेहात लगाउँदै हिँड्ने प्रक्रिया चल्नेछ । न्यायशास्त्रमा कानुनवेत्ताहरूले कुनै घटना हुनासाथ घटनाका कारण कसलाई फाइदा भयो ? भन्ने कोणबाट अनुसन्धान सुरु गर्छन् ।
नेपालको एकीकरणले नेपालीलाई फाइदा भयो कि विदेशीलाई ? यो सहज दृष्टिले मात्र पनि हामीलाई सत्यको नजिक पु¥याउँछ । पृथ्वीनारायण शाह र नेपाल एकीकरणलाई पृथक विश्लेषण गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । यो तर्कमा धेरै बहस आवश्यक छैन । एकथरीले पृथ्वीनारायण शाहलाई दैवीकरण गरेका छन्, अर्कोथरीले दैत्यकरण गर्न खोजेका छन् । एकीकरण प्रक्रियालाई आशयमा होइन, परिणाममा हेर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा नेपालको एकीकरण एउटा महान् र ऐतिहासिक कदम हो । एकीकरणको विरोधले पृथकतावादलाई प्रश्रय दिन्छ । त्यसो भन्दा सामन्ती शासन बलियो र केन्द्रीकृत हुँदा जनवादमाथि थप हमला भएको, सामन्ती उत्पीडनको साङ्लो झन् कसिएको पक्ष भुल्नु हुँदैन । शाह वंशका केही नेता (राजा) हरूको नेतृत्वमा एकीकरण भयो भन्दैमा तिनको वंश र फासिष्ट शासकलाई समेत स्वीकार्नु पर्दछ भन्ने छैन । यो बहस अदृश्य स्वार्थ प्रेरित बहस मात्र हो ।
१) पृथ्वीनारायण शाहको दीर्घकालीन छापामार युद्धकला २) झापा विद्रोहको समग्र पक्ष । यी पक्षहरूबाट जनयुद्धले प्रेरणा लिएको थियो । जहाँसम्म जनयुद्धमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक ढालियो भन्ने भावनात्मक पक्ष छ, त्यो फरक विषय हो । गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा शाह वंशका विरुद्ध हमला गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहका सालिक पनि ढले होलान् । त्यसो त माओवादीले निर्णय गरेका सहिदद्वार, चौतारो, प्रतीक्षालय, अस्पताल, कचहरी भवन सरकारले भत्काएन त ? कार्लमाक्र्सका पुस्तक जलाउने शक्ति सभ्य नागरिक हुनसक्छ ? बहस त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ । जसरी तत्कालीन शाहीसेनाले पुस्तकालय जलाएकै भरमा शाहीसेनाका कमान्डर एमाले र काङ्ग्रेसलाई तालिवानी प्रवृत्ति भन्नु बढी हुन जाला । त्यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमाथि आक्रमण हुँदैमा एकीकरणकै विरोध ठान्नु हुँदैन । बरु सही हुनसक्छ भने राजतन्त्रका कुनै प्रतिनिधिमाथिको साङ्केतिक हमला ज्ञानेन्द्रमाथिकै कुनै प्रतीकात्मक आक्रमण भनेर बुझ्न सही हुनसक्छ । आवेगमय आन्दोलनका अपवादका घटनाहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेर निष्कर्षमा पुग्नु सही हुन सक्दैन ।
रातो खबरसाप्तहिकबाट ।